१७ माघ २०७४, बुधबार २०:३८ – Ekathmandunepal
Home१७ माघ २०७४, बुधबार २०:३८१७ माघ २०७४, बुधबार २०:३८
Month: १७ माघ २०७४, बुधबार २०:३८
हाकिमकी श्रीमतीसंग एक पटक’ यस्तो घटना !!!
१७ माघ २०७४, बुधबार २०:३८ ekathmandu Nepal 0
आठ दिनदेखि परेको मुसलधारे वर्षाले मुगलिन–नारायणघाट खण्डको सडक ध्वस्त बनाएको थियो भने मुगलिन–पोखरा खण्डको सडक पनि ठाउँठाउँमा भत्केको समाचार सुनिएको थियो । हामी पाँचजनाः चैतन्य आचार्य र उनकी आमा, सीताराम अधिकारी, रामप्रसाद श्रेष्ठ र म […]
१७ माघ २०७४, बुधबार २०:३६ ekathmandu Nepal 0
एजेन्सी । हामीले समाजमा देख्छौं कि मानिसहरु यौन सम्बन्ध कुराकानी गर्न हिच्किचाउँछन् । तर यो कुरा सत्य हो कि सुखद जीवनका लागि सुखद सेक्स लाइफ हुनु निक्कै जरुरी छ । सेक्स पनि मानिसको जीवनको त्यस्तै […]
स्तन समाउँदा किन आउछ महिलालाई आनन्द? जानी राखौ-
१७ माघ २०७४, बुधबार २०:३२ ekathmandu Nepal 0
स्तनको स्पर्शले महिलाहरुमा यौन आनन्द प्राप्त हुन्छ । अर्थात् महिलाहरुको यौन उत्तेजनामा योनी जति संवेदनशील हुन्छ स्तनको टुप्पो पनि त्यस भन्दा कम हुँदैन । हुनत यो यथार्थ जान्ने र भोग्नेहरुले थाहा पाएकै कुरा हो । […]
कस्ता खालका युवतीहरु छिट्टै यौन सम्बन्ध राख्न तयार हुन्छन् ?– यस्तो छ यर्थाथ
१६ माघ २०७४, मंगलवार २०:०८ ekathmandu Nepal 0
युवतीहरुमा यौन चाहना भएपनि पुरुषहरु जसरी उनीहरु यौनसम्पर्कका लागि चाडै तयार हुदैनन्। तर नेट चैटिंग पछि भेट्ने हरु भरसक त्यसै दिनमा सेक्स गर्छन। यो अनुपात दैनिक भेट्ने हरुमा धेरै समय लाग्ने गर्छ र सेक्स को […]
लालबाबु बोल्नै नसक्ने गरी बिरामी, यस्तो दिए डाक्टरले सल्लाह
१६ माघ २०७४, मंगलवार १५:०८ ekathmandu Nepal 0
काठमाडौं । मोरङ क्षेत्रनम्बर ६ बाट प्रतिनिधी सभामा विजयी उम्मेदवार लालबाबुु पण्डित बिरामी परेका छन् । उनी अहिले विराटनगरमा आफ्नै निवासमा आराम गरिरहेको उनका स्वकीय सचिव वासिम आलमले जनाएका छन् । उनलाई घाटीमा समस्या भएका […]
१५ माघ २०७४, सोमबार २०:०९ ekathmandu Nepal 0
१५ माघ २०७४, सोमबार २०:०७ ekathmandu Nepal 0
त्यो मेरो बिहेको रात थियो। पहिलो पटक म एउटा पुरूषसँग नजिक हुँदै थिएँ। मेरा एकदमै मिल्ने साथीहरूसँग गरेका कुराकानी र मैले हेरेका अश्लील भिडिओहरू सम्झिँदै मेरो दिमागमा सपना र चाहनाका अनेकौँ तस्वीरहरु घुमिरहेका थिए। म […]
बैंककमा सेक्सको लागि युवतीहरुलाई यसरी तयार गरिन्छ
१५ माघ २०७४, सोमबार १८:४४ ekathmandu Nepal 0
बैंकक। थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक आफ्नो नाइट लाइफको लागि प्रसिद्ध छ। यहाँ बेश्यावृत्तिको लागि युवतीलाई ट्रेनिङ दिँदै गर्दाका फोटोहरु बाहिर आएका छन्। यो थाइ सिटीको नदेखिएको पाटो हो। अहिले थाइ सरकार यस्ता ट्रेनिङ सेन्टरलाई बन्द गर्ने […]
६ लाख भन्दा बढीले हेरेको एस्तो अचम्मको रमाइलो भिडियो हेर्नुहोश
१५ माघ २०७४, सोमबार १८:३४ ekathmandu Nepal 0
यी महिलाको योगाशन हेरेर तपाई हासो कन्ट्रोल गर्न सक्नु हुन्न – हेर्नुस भिडीयो
पाँच पाण्डबसँग द्रौपदीले मनाएको सुहागरात यस्तो रहेछ (577)
जोसमा होस् गुमाउदै आफ्नो कपडा खोल्दै नाङ्गिएर भिडियो… (468)
यी ३२ गुण जो पुरुषमा हुन्छ त्यो पुरुष महापुरुष हुन्छ… (145)
जोसमा होस् गुमाउदै आफ्नो कपडा खोल्दै नाङ्गिएर भिडियो… (1,021)
पाँच पाण्डबसँग द्रौपदीले मनाएको सुहागरात यस्तो रहेछ (775)